Miyaanay Spain ka jirin duufaanno | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta Matthew ayaa ahayd duufaantii ugu dambeysay ee waxyeello ballaaran iyo dhaawac shaqsiyeed ka geysata badweynta Atlantik. Laga bilaabo Juun 1 ilaa Noofambar 30, aaggan waxaa ku habsaday mid ka mid ah ifafaaleyaasha jawiga ugu ba'an ee meeraha: duufaannada.
Xaqiiqdii maalmahan waxaad isweydiisay su'aasha ah waa maxay sababta Spain aysan u jirin duufaanno ama wax la mid ah sida duufaanno ama duufaanno.
Duufaannada waxaa loo kala saaraa qaybo, iyadoo 5 ka mid ahi ay yihiin kuwa ugu khatarsan uguna kan waxyeellada badan, sida ku dhacday duufaanta Matthew. Sida magacyadawaa, la aasaasay muddo 6 sano ah. Sidan oo kale, Duufaanta Matthew ee ku dhufatay aagag ay ka mid yihiin Haiti, Cuba ama xeebta Atlantik ee Mareykanka maalmahan waxay helayaan magacaas maxaa yeelay waa duufaantii saddex iyo tobnaad ee sanadka.
Kahor duufaantii Matthew ku dhufatay, Katrina waxaa loo tixgeliyey tan ugu awoodda badan uguna waxyeellada badneyd sanadihii la soo dhaafay. Duufaantaan waxay samaysantay 2005 waxayna sababtay dhimashada 1.800 oo Mareykanka ah. Tan waxaa sii dheer, in ka badan hal milyan oo qof ayaa guryo la’aan ku dhacday, burburka maaddadana wuxuu dhaafay 150.000 milyan oo doolar
Waa inaan sidoo kale xasuusnaano Duufaantii Mitch, oo 1998-kii sababtay dhimashadii 9.000 ee dalalka Bartamaha Ameerika sida Honduras iyo Nicaragua. Dabeylo ka badan 290 kiilomitir saacaddii, laba milyan iyo badh qof ayaa ku hadhay waxba oo waxay ku khasbanaadeen inay u guuraan deegaano kale oo ay ku noolaadaan.
Duufaannada iskama abuuri karaan Isbayn maadaama biyaha badda ay aad u qabow yihiin sidaa darteed, kaliya duufaano xoog leh ayaa sameyn kara. Duufaannada waxay u baahan yihiin heerkulka sare ee badda si ay u awoodaan inay sameysmaan sida ka dhacda dhammaan aagga Atlantic ama Pacific.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Maxay Spain uga jirin duufaanno?